Baolina kitra - CHAN 2020 :: Iankinan’ny ho avin’ny Barea ny lalao hatrehany anio • AoRaha
Baolina kitra – CHAN 2020 Iankinan’ny ho avin’ny Barea ny lalao hatrehany anio
Am-pelatanan’ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea ny penina hanoratana tantara tsara hatrany ho an’ny taranja baolina kitra. Anjaran’ireo mpilalao eto an-toerana indray ny mametraka fahatsiarovana tsara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CHAN 2020 anio.
Hiatrika ny lalao miverina amin’i Namibia izy ireo anio hariva any amin’ny tanin’ny ekipa mpifanandrina. Fifandonana farany amin’ny dingana fifanintsanana io lalao anio io. Fandraisana anjara voalohany ho an’i Madagasikara ity CHAN ity, ka vonona ny ekipa malagasy hikatsaka ny tapakila amin’ izany fifaninanana izany.
Nitondra fanovàna ny mpanazatra, indrindra teo amin’ny mpilalao hiatrika an’ ity lalao miverina ity na dia manana tombony isa tokana aza ny Barea. Nanaraka akaiky azy ireo ihany koa ny tale teknika nasionaly, Nicolas Dupuis, nandritra ny herinandro farany nanaovana ny fanazarantena. Ity tekni­siana ity izay nanamafy fa: “milamina kokoa ity ekipa ity amin’izao fotoana izao raha oharina tamin’ny lalao mandroso”. “Matoky aho fa ho tsara kokoa ny vokatraamin’ity”, hoy izy.
Mikasa handresy amin’ny alalan’ny fanafihana ny eki­pam-pirenena, raha ny nambaran’Andriamanarivo Franklin, mpanazatra ny Barea. “Henjana ny fiarovan-tenan’ ireo Nambiana. Izany indrindra no antony nanamafisana ny fanafihana sy ny fampidiram-baolina faran’izay haingana”, hoy hatrany ity teknisiana ity.
Mbola tsy fantatra hatreto ireo mpilalao iraika ambin’ny folo hiakatra kianja voalohany. Nanazava i Jean François Debon, teknisiana iray nanaraka ny fanazarantenan’ ny Barea fa “miankina amin’ ny tanjaka ananan’ireo mpilalao mialoha ny lalao ihany no hisafidianana azy. Mbola nanao ny fanazarantena farany izy ireo anio (ndlr: omaly) ka aorian’izay vao hivoaka ny safidin’
ny mpanazatra nasionaly”.
Baolina kitra – «UFFOI 2019 » :: Hivoaka amin’ny herinandro ny lisitr’ireo ho any Maorisy